« Classe patrimoine » : mpianatra sy skoto 813 efa nanao fitsidihana | NewsMada
30.000 no tanjona mandritra ity taona 2016 ity, ka 813 no efa tratra tao anatin’izay roa volana izay. Tsy inona akory izany fa ny isan’ny mpianatra sy ny tanora avy amin’ny fikambanana samihafa, toy ny skoto, nandray anjara tamin’ny « classe patrimoine » na ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara eto Antananarivo, arahina fampahafantarana ny tantara sy ny kolontsaina. Avy amin’ny Lycée Andohalo ny 153 amin’ireo, 60 mpianatry ny EPP etsy Analakely, 560 avy amin’ny CEG 67 ha Avaratra ary skoto ao amin’ny St Michel Amparibe ny 40.
Mikarakara izao fitsidihana maimaimpoana ny tanànan’Antananarivo izao ny Ofisim-paritry ny fizahantany, eto Analamanga (Ortana). Tanjona ny hampahafantarana ny tanora ny kolontsaina sy ireo vakoka eto Analamanga, ny hanefy azy ireo hanana toe-tsaina tompon’andraikitra ka manome lanja ireny toerana ireny. Kendrena koa ny hananan’ny ankizy fahazarana miaro ireny vakoka ireny.
Entanina handray anjara amin’ity fitsidihana ity ny EPP, CEG ary Lycées miankina amin’ny fanjakana, eto Antananarivo. Mpianatra 500 isaky ny sekoly no mahazo tombony amin’izany. 100 isaky ny sekoly kosa no mandray anjara isaky ny « tour de ville », izay maharitra ora roa ary miaraka amin’ny mpitari-dalana enina. Tontosaina isaky ny alarobia antoandro sy asabotsy maraina kosa ny fitsidihana.
Tezaina ho olo-mendrika sy manaja ny fahadiovana ary ny tontolo iainana koa ireo mpianatra. Ampahafantarina azy ireo ilay hoe « Sans trace », fomba fiainana tsy mamela soritra ny fandalovana tamin’ny toerana iray, izany hoe tsy mandoto izay nolalovana.